WordPress Custom Backgrounds
Ampio Custom Backgrounds ho an'ny WordPress 3
Zoma, Jolay 8, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Amin'ity volana ity magazine .net tonga niaraka tamin'ny fizarana tsara tamin'ny fiasa WordPress 3. Ny iray amin'ireo fiasa dia ny fahaizana manova ny sarinao amin'ny lohahevitrao. Tsotra tokoa ilay kaody. Ao amin'ny rakitra lohahevitra functions.php, ampio ity andalana manaraka ity:
Raha tsy manana rakitra fonosana lohahevitra.php ny lohahevitrao, ampio iray fotsiny! Izy io dia rakitra lohahevitra tsy misy fampiasa izay ampidirin'i WordPress ho azy. Ny valiny vita dia izao ianao dia manana safidy lozisialy ao amin'ny fizarana fisehoan'ny fitantanan-draharaha:
Dingana 10 hananganana paikady Twitter B2B tsara kokoa
WOT no lazanao?